အဖွင့်စာမျက်နှာ - ပြည့်စုံဟိန်း ကုမ္ပဏီအုပ်စု
၁၉၉၇ ထဲက စတင်ခဲ့သည်။
We duly incorporated under the Myanmar Citizen's Investment Law of the Uion of Myanmar. Company changed to corporate identy by the merger of Pyei Sone Hein Company Limited and ZIN9Company Limited in 2009.
သတင်းစကား မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ
ကျွန်တော်များ ပြည့်စုံဟိန်းကုမ္မဏီသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ZIN9 company အဖြစ်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြည့်စုံဟိန်းကုမ္ပဏီများအုပ်စုအနေဖြင့် စတင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး နောက် အလေးချိန်အခြင်အတွယ်နှင့်ပတ်သတ်သည့် ပွဲရုံလုပ်ငန်းသုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ကတ္တားများ၊ တိုးလ်ဂိတ် များတွင် အသုံးပြုသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ကားချိန်ကတ္တားများ၊ တိုလ်းဂိတ်များ တည်ဆောက်တပ်ဆင်ခြင်း နှင့် တိုလ်းဂိတ်လုပ်ငန်းသုံး Software & Hardware များကိုတပ်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ ဖတ်ယူမှတ်သား ထားနိုင်သော ATIZ Book Scanner ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တင်ဒါများအတွက် စက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်း၊ WAYNE စက်သုံးဆီပန့်၊ ဆီဆိုင် ထိန်းချုပ်မှု Software ၊ Central Management System နှင့် စက်ဆက်ပစ္စည်းများ၊ တို့ကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.
Road Safety Materials
Electronic Toll Management System
Software & System Engineering
Renewable Energy and Energy Solutions
အမှတ် (၄၉+၁)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း(မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းကြား)၊ လသာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
+951-374594 , 09-73901925
အမှတ် (ပ/၈၈)၊ သပြေကုန်းပွဲရုံ၊ သပြေကုန်းဈေး၊ နေပြည်တော်။
067-432129 , +959-8626105
အမှတ်(၁၄၄/က)၊၇၈လမ်းနှင့်နှင်းဆီလမ်းထောင့်၊သိပ္ပံလမ်းနှင့်စစ်ကိုင်းလမ်းခွဲကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်း။
+952-76616 , +959-5129954 , +959-47126661 , +959-47126662
အခန်းအမှတ် (၃)၊ စက်မှုထမ်းဟောင်းဆိုင်ခန်း၊ ကုန်သည်လမ်း(ကုန်စည်ဒိုင်ရှေ့)၊ မုံရွာမြို့။
+9571-28280 , +959-43041179
အမှတ်(၁၄၄၃/ခ)၊ ရွှေသည်တန်းလမ်း၊ ဇီးကုန်း-ကြို့ပင်ကောက်ကားဂိတ်နှင့် CB Bank အနီး၊ ပြည်မြို့။
+959-43191579 , +959-49517043 , +959-425303597
အခန်းအမှတ် (၃၂)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း(တံတားကြီးတန်း)၊ ၃ ၇ပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့။
+959- 401601509 , +959-250152114
ကျွန်တော်တို့၏ စားသုံးသူ ဖောက်သည်များ
Latest News အားလုံး
PSH Group Booth @ Myanmar Entrepreneurship Summit 2019, Nov 18 2019
Setra Booth @ 4th Myanmar Entrepreneurs Carnival 2019 Oct 09 2019
Setra Booth @ IRRDB International Rubber Conference 2019 Oct 09 2019
PSH Group participated in 6th ProPak Myanmar 2019 Exhibition @ME Yangon. Sep 19 2019
CSR Activities အားလုံး
2019 Annual Trip to Bagan
Yoma Yangon International Marathon 2019
More than 9,000 local and international runners took to the streets of Yangon to participate in the seventh edition of the Yoma Yangon International Marathon this morning. A big congratulations to Peter Ket for winning the Men’s 42km full marathon withatime of2hours, 30 minutes and 13 seconds (02:30:13) and Margaret Wangui for winning the Woman’s 42km full marathon withatime of2hours, 52 minutes and 35 seconds (2:52:35).
2018 Company's New Year Staff Party
Donation (CSR) program
Our company members went to the affected regions by company’s arrangement and encourage to the people by direct contact. It is suchadelight to take part in this donation if we could take awayalittle bit of their pain foralittle while
အမှတ် (၂၉)၊ ရွှေပိတောက်ရိပ်မွန်အိမ်ရာ၊ ရေကြောင်းသိပ္ပံကျောင်းရှေ့၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
+95 9-4431 35270, +95 9-4431 45270, +95 1 515203, +95 1537530
တနင်္လာ - စနေ : ၈:၃၀ နံနက် မှ ၅:၀၀ ညနေ
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေနွေးအိုးများ ဆော့ဝဲလ်များ
PYEI SONE HEIN GROUP OF COMPANIES
© 2021 PYEI SONE HEIN GROUP OF COMPANIES